I-A-frame kaphayini ofudumele Obekwe Ezihlahleni! - I-Airbnb
I-A-frame kaphayini ofudumele Obekwe Ezihlahleni!
463 okushiwo abanye
Center Conway, New Hampshire, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Joya
U-Joya Ungumbungazi ovelele
I-A-frame ene-pine efudumele ingamakhilomitha ambalwa ukusuka edolobhaneni lase-Conway, imizila yokuqwala izintaba neye-White Mountain, i-Saco River, i-Conway Lake, i-Cathedral Ledge nokunye okuningi!
Jabulela umpheme omkhulu nomfula ozungezwe izihlahla kanye NE-WIFI esheshayo kanye ne-TV engu-43 ". Iqoqo le-Nostalgic VHS ongakhetha kulo kanye nentambo (akukho ikhebula), nemidlalo yebhodi enikeziwe!
Sicela uqaphele ukuthi lolu hlu lusendaweni enokuthula futhi alufihlekile ehlathini.
Izitebhisi eziya kuwo womabili amagumbi okulala ziwumqansa KAKHULU (bona izithombe zohlu) ngakho-ke sicela ukucabangele lokho ngaphambi kokubhuka.
Indlu ayinakho ukukhanyisa phezulu egumbini lokuphumula noma emakamelweni okulala kodwa kukhona izibani eziningi eziyenza ibe nomuzwa opholile okhanyayo ophansi kakhulu ebusuku!
Kukhona i-heater ye-rennai egumbini lokuphumula eshisisa indlu yonke kodwa ukushisa akuhambi kahle njalo emakamelweni okulala angaphezulu. Kukhona izinto zokududuza eziwugqinsi kuwo wonke umbhede kanye neziko elisebenza ngogesi ekamelweni elikhudlwana elinombhede wosayizi wendlovukazi osiza ukushisa phezulu. Abantu abaningi abanazo izikhalazo ezinyangeni zasebusika ezibanda kakhulu kodwa sicela uqiniseke ukuthi lokhu ngeke kube inkinga eqenjini lakho ngaphambi kokubhuka.
Ezinyangeni zasebusika kunconywa ukuthi ulethe imoto enamathayi eqhwa noma i-4WD njengoba indlu isendleleni ewubhuqu. Kukhona futhi i-driveway plough kodwa angiqiniseki ukuthi uzofika nini phakathi nosuku ngakho izihambeli kufanele zilungele ukuxosha izimoto eziphumayo nasezindleleni zokuhamba njengoba kudingeka (ngizohlinzeka ngamafosholo).
Ikhabhinethi ihlanzwa ngokomsebenzi phakathi kokuhlala ngakunye kodwa sicela uqaphele ukuthi kungatholakala ubulembu noma intuthwane ngezikhathi ezithile (uma kubhekwa ubunjalo bendawo).
Sicela uhlole inqubomgomo yokukhansela futhi uqiniseke ukuthi ikusebenzela ngaphambi kokubhuka.
4.79 out of 5 stars from 463 reviews
4.79 · 463 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-463
Uma lolu hlu lubhukhelwe izinsuku ongathanda ukuhlala kuzo, sicela uhlole olunye uhlu lwami!
Usayizi ofanayo, ngokulinganayo njenge-rustic, kodwa ukuthinta kwesimanjemanje okuneziko nendawo enhle yangaphandle:
-Scenic Kancamagus onguthelawayeka
-Izithombe zokugibela isitimela
Sicela ungangabazi ukungishayela noma ukungithumelela imiyalezo ngesikhathi uhlala nganoma yimiphi imibuzo!
UJoya Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Center Conway namaphethelo